उखु किसानले खेतबारीबाट बेच्ने वित्तिकै पैसा पाउने व्यवस्था गर्ने वस्था मिलाउछु : मन्त्री भट्ट - Experience Best News from Nepal
आइत, माघ ५, २०७६
३त्रिसुलीबाट जिवितै उद्दार गरिएका बिनयको बयान, छोरालाई तातो दुध खुवाएर, जेठो छोरो मैले च्यापे भने कान्छो जमुनाले, त्यसपछि त्रिसुलीबाट बगेम
४छोराछोरीलाइ फा’लेर श्रीमतीसंगै अंगालोमा बेरिएर त्रिसुलीमा हा’म्फाले, उद्दार गर्दा समातेर बगिरहेका थिए विनय !!
५इरानको हमलापछि ट्रम्पको प्रतिक्रिया : हामीसँग हाईपरसोनिक मिसायल छ तर इरानसँग युद्ध गर्दैनौ (संबोधनको पूर्णपाठ)
६मेस्सीले राखे यी ८ सर्त र माग !! पुरा नभए मेस्सिले बार्सिलोना छाड्न सक्ने
७अमेरिका र इरानको तनाव भैरहेको बेला, चिन र अमेरिकाको यस्तो टकराव !
८फेरी सेफकी छोरी साराको विकिनी अवतारले बलिउडमा मच्चियो हंगामा !!
उखु किसानले खेतबारीबाट बेच्ने वित्तिकै पैसा पाउने व्यवस्था गर्ने वस्था मिलाउछु : मन्त्री भट्ट
प्रकाशित मिति : शुक्र, पुस १८, २०७६
उद्योग बाणिज्य तथा आपू्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानले खेतबारीबाट बेच्न वित्तिकै पैसा पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् । बिहिबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री भट्टले उखु जोख्ने वित्तिकै किसानको खातामा रकम जाने गरि व्यवस्था मिलाउन लागेको दाबि गरेका हुन् ।
उखु किसान र चिनी मिलको समग्र समस्या पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेको भन्दै मन्त्री भट्टले कार्यदलको सुझावको आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताए ।
‘मिलको गेटमा उखुको हुनेवित्तिकै तुरुन्तै बैंकमार्फत भुक्तानी होस् भनेर कार्यदल गठन गरेका छौं । त्यसले किसानको समस्या पत्ता लगाउँछ, व्यवसायीको समस्या के हो, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के हो पत्ता लगाउँछ । किसानको ऋण समस्या बाध्यताबारे अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा ल्याउँछ । त्यसपछि सरकारले आवश्यक कदम उठाउँछ’ उनले भने ।
अहिले उखु किसानहरु आन्दोलित बनेका छन् । उखु बेचेपनि त्यसको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरुले पैसा नपाएसम्म घर फिर्ता नजाने जनाएपछि केहि उद्योगीहरुले पैसा फिर्ता गर्ने जनाएकजा छन् ।
यस्तै, उद्योगीका समस्या समेत हल गर्न सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको जनाए । विदेशी चिनीमा प्रतिबन्ध लगाएको लगातका कुराहरु राख्दै मन्त्त्री भट्टले नेपालका चिनी मिलका पुराना मेसिन भएकाले चिनी भने जति उत्पादन गर्न नसकिएको जनाए ।
एमसीसी विरुद्ध विप्लवको नेपाल बन्दको चेतावनी: यस्तो छ कार्यक्रम तालिका
खाडीमा ११ लाख नेपाली जोखिममा, विमान चार्टर्ड गरेरै मध्यपूर्वबाट नेपालीको उद्धार गर्ने तयारी
पुस २७ गते पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा
सल्लाहमै त्रिशूलीमा हाम फाल्यौँ !
आज आइतबार: श्री पशुपतिनाथ बाबाको दर्शन गरि तपाइको दिन के कस्तो छ, हेर्नुहोस !!